Ka anyị tụlee ihe ndị ụgbọ okporo ígwè na ụlọ ọrụ na-eme ka ị nọgide na-adịghị ize ndụ. Ihe ka ọtụtụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-eme ka usoro nhicha ha dị ọcha maka ụgbọ oloko na ọdụ. E wezụga-esiwanye ike ihicha, ugboro ole na ụgbọ oloko na na ụgbọ nwekwara ụba. Nhicha na-eme kwa awa ma na-agụnye iji ọgwụ disinfectant ekpochapụ handrails, doorknobs, ejiri, na ime ụlọ mposi. Ọzọ antibacterial ngwaahịa, tinyere sanitizers na ekpochapụ, na-na-nyere na ụgbọ, n'ụgbọ oloko, na n'ọrụ ndị ọrụ.
Anyị na-akwado na-aga 100% contactless ma ọ bụrụ na i nwere ike. Ọ bụrụ na ị zụta gị ụgbọ okporo ígwè tiketi online maka ihe ọ bụla mere, na-aga n'ihu niile ego kwesịrị contactless ma ọ bụrụ na o kwere omume. Gịnị? Ọfọn, e nwere ụfọdụ gwara ọgwa ozi. Nke a bụ ihe Bank of England kwuru: "Dị ka ọ bụla ọzọ n'elu na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-na kọntaktị na, ndetu pụrụ ibu bacteria ma ọ bụ nje virus. Otú ọ dị, ihe ize ndụ jụrụ site na-ejizi a polima dee bụ dịghị ukwuu karịa emetụ ọ bụla ọzọ na-ahụkarị ìhè dị ka handrails, doorknobs, ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. ” Mbụ nke ọnwa a akwụkwọ akụkọ ekwu na World Health Organisation (WHO) nwere kwuru banknotes nwere ike agbasa coronavirus, ya mere ndị mmadụ ga na-agbalị iji contactless ịkwụ ụgwọ kama. Ma, ọ na-ama ahụ kọrọ na WHO gọrọ agọ kwuru ego e ebunye ndị coronavirus, na na ọ bụ "echiche na-ezighị" - ya mere na-aga ọnụ ọgụgụ.
Otu n'ime Njem ụgbọ okporo ígwè na-emeghị njem obodo bu London. The Transport maka London kpughere ihe "enwekwukwa ihicha ọchịchị" iji melite ọcha etoju na isi obodo nke ọha iga, ma ọ dịghị ihe na-amanye mmadụ ịgbara. Nke a bụ gị. Ihe bụ isi bụ na ị ga-anwale izere imetụ ndị ọzọ aka. Travel na obere ọrụ n'aka ugboro ma ọ bụrụ na o kwere omume, eyi uwe ma ọ bụrụ na ị pụghị izere emetụ rails, ọdụ, etc. Ebu gị onwe gị na disinfectant gị. Ekwela adabere Train Stations iji na-enye gị mgbe niile. Mma mma karịa ndo!
Ọtụtụ nnukwu kọfị ígwè na-enwe a echegharị echiche na omume ndị coronavirus akasiaha, na Starbucks nwa oge machibido ojiji nke reusable iko - a mere nke plastic, iko, ma ọ bụ ihe achara - maka nchekwa nke ndị ahịa na ndị ọrụ. na-emekarị, ị nata ego maka iweta iko gị, ma ị gaghị esi otú ahụ omume ugbu a! Ị na-aga na-ịtụfu na obere ego maka nchekwa, n'ihi.
Ma ihe anyị na-eche bụ ihe dị mkpa ka na-ekwu na ndị ọzọ yiri ihe ize ndụ na-na virus na-egbu oge maka 48-72 awa na a ike n'elu, dị ka handrail. Nke a adịghị nnọọ emetụta Ụgbọ oloko ezie. Ọ BỤLA ọha ohere.
Ọ bụrụ na ị nwere na-emetụ rails, mkpọchi, tiketi, were gabazie, -agbalị ime ya na nanị otu aka ma ọ bụ mma, gị n'ikpere aka! Nọgidenụ phones na ndị ọzọ "dị ọcha" n'aka na asa ma dị ka n'oge na-adịghị dị ka i nwere ike na ị na-aga.
Mkpọ gị onwe gị na snacks ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè. Many trains have mechiri ụlọ ezumike klaasị ha nke nwa oge ma wepu ha nri. Ya mere, oge iji nweta ihe na gị lunchboxes! Were gị onwe gị na ntụrụndụ ma ọ bụ zuo site ebe nri Jeriko tupu ị banye. A jikoro na-N'ezie, e mere iji chebe gị ma belata mgbasa nke COVID-19 virus!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Covid-19: Olee Train Travel Industry nye ndụmọdụ On Njegharị?” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcovid19-train-travel-industry-advise%2F%0A%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)